Hay’adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in Yurub ay noqtay xuddunta faafitaanka fayruska Corona. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hay’adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in Yurub ay noqtay xuddunta faafitaanka...
Hay’adda caafimaadka adduunka oo sheegtay in Yurub ay noqtay xuddunta faafitaanka fayruska Corona.
Hay’adda caafimaadka adduuka ee WHO ayaa dedaal badan ku bixinaysa arrimaha a xiriira caauqa Corona oo si weyn u qabsaday dalalka caalamka, waxayna wali sii wadaa dedaalada lagu bixinayo xakamaynta cudurkaas.
Agaasimaha guud ee WHO Dr. Tedros Adhanum Gebresos ayaa si cad u tilmaamay in dalalka ku yaalla yurub ay noqdeen xuddunta kaliya ee xiligan sahahashay in caabuqa Corona uu sii faafi isla markaana uu galaafto oo nafta dhaafiyo boqolaal dad ah sidoo kalena uu haleelo kumanaan kale.
Tedros ayaa shacabka iyo madaxda dalalka yurub ku booriyey inay qaadaan tillaabooyin culus oo looga hor tagi karo Corona, isla markaana ay muhiim tahay in la yareeyo shirarka iyo isu imaatinka bulshada si loo badbaadiyo nolosha dadweynaha yurub iyo kuwa caalamka.
Hadalada Gebresos ayaa yimid kadib markii wadamo badan oo Yurub ah ay ku dhawaaqeen in ay kordheen tirada kiisaska cusub ee CoronaVirus ee ka dilaacay yurub iyo tirada dhimashada oo sii kordhaysa.
Dalka Spain ayaa noqday midka ugu badan ee uu saameyey caabuqa Crona, sidoo kale dalka Talyaaniga ayaa isagana waxaa kusii kordhaya faafitaanka cudurka taasoo keentay in boqolkiiba 50 ay gaartay tirada dadka u dhintay caabuqa Crona, waxaana dadka dhintay ay gaarayaan in ka badan 120 qof, halka titada dadka uu cudurku haleelay ay gaartay 4,200.
Previous articleTaliska ciidanka Mareykanka Afrikom oo kordhiyay duqeymaha loo geysto Al-Shabaab
Next articleWasiirada Gaashaandhigga Turkiga iyo Britain oo booqanaya xadka u Dhexeeya Siiriya iyo Tukiga.